လျှာပူလောင်ရင် အမြန်ဆုံးသက်သာစေမယ့်နည်းလမ်းအသွယ်သွယ် - Myanmarload
လွန်ခဲ့သော ၃ နှစ် က 21:10 July 07, 2017
အလုပ်ပြီးပြီးချင်း ဗိုက်ဆာဆာနဲ့ ထမင်းပူပူဟင်းပူပူလေးတွေကို အလောတကြီး စားလိုက်မိရာက လူတော်တော်များများ လျှာပူလောင်တာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ပူလွန်းတဲ့ အစားအသောက်တွေကို ဗိုက်ဆာလွန်းလို့ စားလိုက်ပြီးမှ လျှာပူလောင်ပြန်တော့ နေရခက်ပြန်ရော။ ဒီလို လျှာပူလောင်နေတဲ့အချိန် နောက်ထပ် အစာထပ်ဝင်ဖို့တောင် စိတ်မပါပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီလို လျှာပူလောင်တဲ့အခါ သက်သာအောင် ဘယ်လိုလုပ်သင့်လဲဆိုတာကိုတော့ လူသိနည်းနေပါသေးတယ်။ Dr Myanmar အဖွဲ့မှ မျှဝေထားတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကတော့ လျှာပူလောင်တာကို အမှန်တကယ်သက်သာစေပါလိမ့်မယ်နော်။
1. ပါးစပ်ဖြင့် အသက်ရှူပါ
ပူလွန်းတဲ့အစားအစာတစ်ခုခုကို စားမိလိုက်ပါက ချက်ချင်းထွေးထုတ်ပြီး လျှာကိုအပြင်ထုတ်၍ ပါးစပ်ဖြင့် အသက်ရှူပါ။ ထိုကဲ့သို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် လျှာမျက်နှာပြင်သည် လေအေးနှင့်ထိတွေ့လိုက်ရတဲ့အတွက် နာကျင်ခြင်းမှ သက်သာသွားစေနိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး နေသာထိုင်သာရှိတဲ့အထိ ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်ပါ။
2. အအေးတစ်ခုခုကို သောက်လိုက်ပါ
လျှာအပူလောင်သွားပါက ချက်ချင်းအေးတဲ့အရာတစ်ခုခုကို စားလိုက်ပါ။ အပူလောင်သွားတဲ့လျှာရဲ့ အပူချိန်ကိုလျော့ကျစေရုံသာမက ရောင်ရမ်းခြင်းနဲ့ တစ်သျှူးပျက်စီးခြင်းတွေကိုပါ သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
အအေးကို မမြိုချမီတတ်နိုင်သမျှ ပါးစပ်ထဲမှာကြာကြာငုံထားခြင်းဖြင့် အပူလောင်ခြင်းဝေဒနာကို သက်သာစေပါတယ်။
အပေါ်က အချက်နဲ့တော့ ဆန့်ကျင်ဘက်ပါပဲ။ 2013 ခုနှစ်မှာပြုလုပ်တဲ့ လေ့လာ စမ်းသပ်မှုတွေ အရ ရေကြက်သီးနွေးငုံပေးခြင်းဟာ အပူလောင်တဲ့ဒဏ်ရာပိုမဆိုးအောင် ဟန့်တားပေးနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ သွေးလည်ပတ်မှုပိုမိုကောင်းမွန်စေတာကြောင့်လည်း တစ်သျှူးတွေပျက်စီးခြင်းကို လျှော့ချနိုင် ပါတယ်။ ထို့ပြင် ဆားသည် ပါးစပ်တွင်းနဲ့ အနာနားတစ်ဝိုက်ပိုးဝင်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တာကြောင့် ဆားရေနွေးက အကောင်းဆုံးအိမ်သုံးဆေးမြီးတိုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
- ဆားလက်ဖက်ရည်ဇွန်တစ်ဝက်ကို ရေနွေးတစ်ဖန်ခွက်ဖြင့်ရောမွှေပါ။
- စက္ကန့် 30 ခန့် ပါးစပ်ထဲတွင် ငုံထားပါ။
- လျှာအနာကျက်သည်အထိ တစ်နေ့လျှင် အကြိမ်ပေါင်းများစွာပြုလုပ်ပါ။
ပျားရည်သည်လည်း လျှာအနာကျက်စေဖို့အကောင်းဆုံး ဆေးတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပျက်စီးသွားတဲ့အရေပြားကို ပိုးဝင်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အပြင် သဘာဝအရောင်ကျဆေးအနေနဲ့လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
- ပျားရည်လက်ဖက်ရည်တစ်ဇွန်းကို လျှာပေါ်မှာသုတ်လိမ်းပါ။
- မမြိုချမီတတ်နိုင်သလောက် ကြာအောင်လျှာပေါ်တွင်ငုံထားပါ။
- တစ်နေ့လျှင် 2-3 ကြိမ်ခန့် ပြုလုပ်ပါ။
သတိပြုရန်မှာ ပျားရည်သည် ကလေးများအတွက် အဆိပ်ဖြစ်စေတဲ့ ပိုးတစ်မျိုး ပေါက်ပွားစေနိုင်တာကြောင့် တစ်နှစ်အောက်ကလေးများကို မတိုက်ကျွေးသင့်ပါ။
ရှားစောင်းလက်ပတ်သည် လျှာပေါ်ရှိ ပျက်စီးသွားတဲ့ဆဲလ်တွေကို ပြန်လည်ကောင်းမွန်စေရုံသာမက အနာကျက်စေရန်နှင့် ရောင်ရမ်းနာကျင်ခြင်းသက်သာစေရန်လည်း အထောက်အကူပြုပါတယ်။
- ရှားစောင်းလက်ပတ်အရွက်မှ အနှစ်များကိုခြစ်ယူ၍ လျှာအပူထားတဲ့နေရာပေါ်သို့ တင်ပေးပါ။ တစ်နေ့လျှင် အကြိမ်များစွာပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
- ရှားစောင်းလက်ပတ်အနှစ်ကို ရေခဲတုံးလေးများပြုလုပ်၍လည်း ငုံပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒိန်ချဉ်သည်လည်း လျှာအပူလောင်ခြင်းမှ ချက်ချင်းသက်သာစေတဲ့ ဆေးမြီးတိုတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒိန်ချဉ်ရဲ့အေးမြစေတဲ့ သဘာဝဓာတ်ဖြင့် အပူလောင်ထားတဲ့ဒဏ်ရာမှ အပူငွေ့တွေကို စုပ်ယူပေးနိုင်တာကြောင့် အနာကိုသက်သာစေတဲ့အပြင် နေလို့ကောင်းပါတယ်။
- ဒိန်ချဉ်အနည်းငယ်ကို လျှာပေါ်တွင်တင်၍ စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာအောင် ထားပါ။
- ဒိန်ချဉ်ခွက်တစ်ဝက်ကုန်သည်အထိ ထိုနည်းအတိုင်း စားသုံးပါ။
သကြားသည် အပူလောင်ဒဏ်ရာကြောင့် မသက်မသာဖြစ်ခြင်းကို ကောင်းစွာ ကုစားနိုင်တဲ့ ဆေးကောင်းတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ပြင် သကြားသည် အရသာခံအာရုံကိုလည်း ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။
- လျှာပေါ်သို့ သကြားလက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်းကိုတင်ပါ။
- အာခေါင်ဖြင့် ထိကပ်၍ သကြားများကို ပျော်အောင်ပြုလုပ်ပါ။
- လိုအပ်မယ်ထင်သလောက် မကြာခဏ လုပ်ဆောင်ပါ။
သတိပြုရန်မှာ ဤနည်းလမ်းသည် ဆီးချိုရောဂါရှိသူများနှင့် မသင့်တော်ပါ။
ပူစီနံမှာ ပရုတ်ဓာတ်ပါဝင်တာကြောင့် အအေးကိုခံစားလွယ်တဲ့ အာရုံကြောတွေကိုလှုံ့ဆော်၍ အပူလောင်တဲ့နေရာကို ထုံစေကာ ရောင်ရမ်းခြင်းကိုလျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။ ထို့ပြင် ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ အစွမ်းသတ္တိရှိတဲ့ ဆေးဖက်ဝင်အပင်တစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
- လျှာအပူလောင်ထားတဲ့နေရာကို ပူစီနံသွားတိုက်ဆေး အနည်းငယ်လိမ်းပေး၍ သွားတိုက်ဆေးခြောက်သွားသည်အထိ လျှာကိုအပြင်ထုတ်ထားပါ။ ထို့နောက်တွင် ရေအေးဖြင့် ဆေးပေးပါ။ တစ်နေ့လျှင် 2-3 ကြိမ်ခန့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
- ပူစီနံလက်ဖက်ရည်ကို ခေရခဲသေတ္တာထဲတွင်ထည့်ထားပြီးနောက် အေးလာပါက ဖြေးဆေးစွာ သောက်သုံးပါ။
- ပူစီနံ ပီကယ်ကိုလည်း မကြာခဏစားပေးနိုင်ပါတယ်။
9. ဗီတာမင် E
ဗီတာမင် E အဆီသည် အပူလောင်ဒဏ်ရာကြောင့် မသက်မသာဖြစ်ခြင်းကို ချက်ချင်းကောင်းမွန်စေနိုင် ပါတယ်။ ထို့ပြင် လျှာတစ်သျှူးများအသစ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို အကူအညီပေးတာကြောင့် အနာကျက်ခြင်းဖြစ်စဉ်ကို ပိုမိုလျင်မြန်စေပါတယ်။
- ဗီတာမင် E ဆေးလုံးကို ဖွင့်လိုက်ပါ။
- ဆေးရည်များကို လျှာမျက်နှာပြင်သို့လောင်းချပါ။
- အပူလောင်ထားတဲ့နေရာအကုန်လုံးကို ရောက်စေရန် လက်ချောင်းလေများဖြင့် ဖြန့်ပေးပါ
- နေ့စဉ် မကြာခဏပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
- ပူနွေးသော (သို့) ပူလွန်းသောအရည်များသည် အပူလောင်ဒဏ်ရာကို ပိုဆိုးနိုင်တာကြောင့် ရှောင်ကျဉ် သင့်ပါတယ်။
- အက်ဆစ်ဓာတ်ပါတဲ့ အစားအစာများ (ဥပမာ - ခရမ်းချဉ်သီး၊ အချဉ်ဓာတ်ပါတဲ့ အသီးများ) ကို ရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်။
- အာလူးကြော် (သို့) မြေပဲလှော် စတဲ့အကြော်အလှော်များကို ရှောင်ကျဉ်ပါ။
အစပ်ပါဝင်တဲ့ အစားအစာတွေဟာ လျှာအပူလောင်ခြင်းကို ပို၍မသက်မသာဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့် ရှောင်ကျဉ် သင့်ပါတယ်။
- ရေအေးသောက်ခြင်းဖြင့် လျှာနှင့်ပါးစပ်ကို စိုးစွတ်အောင်ပြုလုပ်ပါ။
- တံတွေးထွက်ခြင်းကို လှုံ့ဆော်ရန် သကြားလုံးစားခြင်း၊ ပီကေဝါးခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
- ခံတွင်း အတွင်းရှိနံရံများကို နေမထိထိုင်မသာဖြစ်အောင် ပြုလုပ်နိုင်တဲ့အရက်နှင့် အရက်ပါဝင်တဲ့အရည်များ အားလုံးကို ရှောင်ကျဉ်ပါ။
- ခံတွင်းကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ပါ။
- အစားအစာများကို မစားမသောက်မီ အပူချိန်ကို အရင်သိအောင်ပြုလုပ်ပါ။
- အကယ်၍ မိမိအခြေအနေက သက်သာကောင်းမွန်မှုမရှိပါက ဆရာဝန်ထံချက်ချင်းသွားရောက်ပြသသင့် ပါတယ်။
Page generated in 0.1957 seconds with5database query and6memcached query.